Samsung na-agbakwunye ngalaba ọhụrụ na ngwa Galaxy Themes maka S10 | Gam akporosis
Samsung na-agbakwunye ngalaba ọhụrụ na ngwa Galaxy Themes maka S10
Fewbọchị ole na ole gara aga, onye mụ na ya bi Manu bipụtara otu edemede ebe o gosipụtara gị dị iche na akwụkwọ ahụ aja maka ọhụrụ Galaxy S10 nso, nke ọ na - eji ohere nke oghere / s na ihuenyo mee ka ọ bụrụ ihe a na - apụghị ịhụ anya mgbe anyị nọ na ihuenyo ụlọ nke ọnụ na Inye ihe kariri mma.
N'adịghị ka ndị ọzọ na-emepụta na Samsung dị ka ọ dị, ọ dị ka ọ masịrị mmegharị ahụ ndị ọrụ na-eme ịkekọrịta akwụkwọ ahụaja dị iche iche ka ha nwee ike zoo igwefoto / s n'ihu nke S10 ma ọ nwere naanị tinye ngalaba ohuru n’ime ngwa eji eme ihe ama.
Imirikiti nke akwụkwọ ahụaja etinyere nke Galaxy Themes ngwa maka S10 dị dị ka ịzụrụ ma ọ naghị enye anyị ohere ịnwale ha tupu ịgafe ndenye ọpụpụ, yabụ ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị ọrụ na-anaghị etinye ego iji hazie ngwaọrụ gị, ị ga-echere ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ ị ga - enweta dị ka ugbu a ọtụtụ na-akwụ ụgwọ.
Ọbụna ma ọ bụrụ na ị kwenyere ịkwụ ụgwọ, ọ bụrụ na ọnụahịa ahụ yiri gị nke ọma, ekwere m n'eziokwu na ọ ka mma ichere maka ụdị ụdị ego a ịbawanye, ebe ọ bụ na ọnụ ọgụgụ ahụ pere mpe ugbu a. Ọzọkwa, Galaxy Gburugburu iwu anaghị enye anyị ohere ịrịọ nkwụghachi maka ihe ozugbo anyị zụrụ ya.
Nwekwara ike ịhọrọ ịchọ ịntanetị ma budata ha n'efu. Cheta na na ederede ibe m Manu, ị nwere ihe ngebichi 15 n'efu na mkpofu maka ọkwa Galaxy S10 ọhụrụ. I nwekwara ike ịkwụsị nke a Reddit eri ebe ndi oru na etinye ihe nke ha, na ebe anyi nwere ike budata nke kachasị anyị mma n’efu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Samsung na-agbakwunye ngalaba ọhụrụ na ngwa Galaxy Themes maka S10
Huawei faịlụ ọhụrụ patent egosi a smartphone na abụọ meziri
New Huawei P30 Pro Igwefoto Igwefoto Ihe Periscope Lens bia Ike